Maraykanka oo ku dhowaaqay qorshe ka dhan ah dalabka Villa Somalia | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Maraykanka ayaa ku adkeesatay go'aankeeda ayadoo rabta in ay Ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya intuu Trump xilka wareejin.
NAIROBI, Kenya - Dowladda Maraykanka ayaa mar kale sheegtay in ay ciidankeeda kala baxayso Soomaaliya, xilli Villa Somalia ay dalbatay in ciidankaasi joogaan, si ay caawinaad uga helaan.
Waxa ay dowladda Maraykanka sheegtay in isbedal aad u weyn ku sameysay ciidankeeda ku sugan Africa iyo Yurub, sidoo kalena in qorasha Soomaaliya looga saarayo qaadan doonto waqti iyo dib u eegis.
Ciidamada Maraykanka ee Africa iyo Yurub ayaa loo bixiyey magaca USAREUR-AF iyadoo taiyaha ciidankaasi loo dalacsiiyey dhowaan Gen. Christopher G. Cavoli.
Taliyahan cusub ayaa sheegay in uu ku dhaqaaqi doono fulita ammarka madaxda Maraykanka ee ah sidii ciidankooda looga saari lahaa Soomaaliya.
Gen. Christopher G. Cavoli ayaa sheegay in ciidankooda jooga Soomaaliya ay leeyihiin muhiimad aad u weyn, balse qorshan ay ciidanka kula baxayaan aanay ku dhici doonin si degdeg ah oo ah in Hal mar ay la baxaan askartooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay la taliyeyaasha sarsare inuu doonayo inuu Ciidamada Mareykanka kasoo saaro Soomaaliya, si uu uga dhabeeyo balanqaadyadii ololaha ee ahaa inuu askarta dibadda ku sugan dib ugu soo celinayo dalkooda.
Mareykanka waxaa Soomaaliya ka jooga 650 ilaa 800 oo askari, sida laga soo xigtay Taliska Mareykanka ee Afrika [AFRICOM], oo ay ku jiraan askar gaar ah oo gacan ka geysanaya tababarka Ciidamada Soomaaliya. Inta badan askarta Ameerikaanka waxay dalka yimaadeen kadib markii Trump uu xafiiska yimid.
Trump ayaa Ciidamada usoo diray Soomaaliya bartamihii sanadkii 2017-ka taasoo qeyb ka ah dadaalada lagula dagaalamayo Al-Shabaab, howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la qorsheeyay in uu ka baxo dalka dhamaadka sanadka soo socda.